बिहेका लागि छुट्टी नपाएपछि सुरक्षामा खटिएका जवानले हाकिमलाई गोली ठोके::देश र जनताप्रति समर्पित
भारतमा यतिखेर लोकसभा निर्वाचन जारी छ । यस्तोमा चुनावी सुरक्षाका लागि पर्याप्त संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
हावडाको बग्नानमा चुनावी सुरक्षामा खटिएका सेन्ट्रल फोर्सका एक २६ वर्षे जवानले छुट्टी नदिएको भन्दै बिहीबार इन्सास राइफलबाट १३ राउण्ड गोली चलाउँदा उनका सिनियरको मृत्यु भएको छ भने अन्य दुई गम्भीर घाइते भएका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाको समाचारअनुसार आगामी मे २० मा तय गरिएको विवाहका लागि छुट्टी नदिएको झोंकमा उनले फायर खोलेका हुन् ।
आसाम राज्यको सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत कार्यरत लक्ष्मीकान्त बर्मनले सब इन्सपेक्टर भोलानाथ दाससँग विवाद चलिरहँदा फायर खोलेका हुन् । डिप्रेसनका विरामी उनलाई भाग्न खोज्दा फौजका अन्य सदस्यले पक्राउ गरी अस्पताल पु¥याएका छन्
बिश्वमा परमाणु हतियार कुन देशसंग कति छन् ? हेर्नुस्
तीन हप्ताकी बालिकाको पोर्न भिडियो बनाउने यी हुन पिपासु ! सजाए सुनेर अदालतमै भए बेहोस
फेरी चितवनमा गोली लागेर एक घाइते
युराेपियन युनियनकाे बिषयलाइ लियर प्रधानमन्त्री काे आकस्मिक राजिनामा
मृ’तक भनिएका राष्ट्रपति एक्कासी वैठकमा